खोजी ईन्जिन स्थिति: यसलाई कसरी आन्तरिक लि strategy्क रणनीति संग सुधार गर्ने पछिल्लो मेलिiling डाटाबेस
खोजी ईन्जिन स्थिति: यसलाई कसरी आन्तरिक लि strategy्क रणनीतिसँग सुधार गर्ने
घर » ईमेल डाटाबेस ब्लगहरू » डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी फ्लोरिडा » खोजी ईन्जिन स्थिति: यसलाई कसरी आन्तरिक लि strategy्क रणनीतिसँग सुधार गर्ने
सबै बजारलाई थाहा छ, खोज ईन्जिन स्थिति अनलाइन रणनीतिहरूको एक मुख्य स्तम्भ हो। youtube दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस् उत्तम कुञ्जी शव्दहरूको छनौटबाट छविहरूको वैकल्पिक पाठको अनुकूलन गर्न, SEO स्थिति हामी अप्टिमाइज गर्न सक्दछौं भनेर अनगिन्ती कारकहरू मिलेर बनेको छ ताकि हाम्रो पृष्ठले खोजी ईन्जिनहरूमा स्थिति बढाउँदछ।
तर यी सबै कारकहरू बीच, हामी कहिलेकाँही केहि विवरणहरू बिर्सन्छौं जुन सर्च इन्जिन स्थितिका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, बाह्य लिंकहरुमा ध्यान दिन र लि building्क निर्माण गर्ने रणनीति बनाउन यो धेरै सामान्य छ, तर के तपाईंले विचार गर्नुभयो आन्तरिक लिङ्क तपाइँको वेबसाइट को? यदि उत्तर "होईन", हो भने यसलाई समाधान गर्ने र तपाइँको SEOलाई थोरै प्रयास गरेर सुधार गर्ने समय हो!
खोजी ईन्जिन स्थितिको लागि आन्तरिक लि of्कको महत्त्व
यो आन्तरिक लिङ्क , त्यो हो, लिंकहरू जुन तपाईंको आफ्नै वेबसाइट भित्र एक पृष्ठबाट अर्कोमा लैजान्छन् , तपाईले सोचे भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कारक हो। गुगलको लागि, आन्तरिक लिंकहरूले सामग्री र स्थान्तरण मान र एक पृष्ठबाट अर्को पृष्ठमा महत्वको बीचको सम्बन्ध देखाउँदछ।
आन्तरिक लिंकले परिभाषित गर्दछ संरचना तपाइँको वेबसाइट को। तिनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई एक साईटबाट अर्को साइटमा जान मद्दत गर्छन् र खोजी ईन्जिनहरूले सामग्री कसरी व्यवस्थित गरिएको हो बुझ्न गर्दछ। एक राम्रो विकसित आन्तरिक लि strategy्क रणनीतिले तपाइँको पृष्ठहरूलाई अनुक्रमणिका र खोज इञ्जिनमा राख्न सजिलो बनाउँदछ, र आगन्तुकहरूको क्लिक र रूपान्तरण दर पनि बढाउँदछ। र भाग्यवस, यो एक कारक हो जुन तपाइँको नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा छ।
काममा तल झर्नु भन्दा पहिले, हामी केहि हेरौं आधारभूत सिद्धान्तहरू खोजी ईन्जिन स्थितिमा आन्तरिक लिंकको:
पृष्ठसँग अधिक लिंकहरू छन्, गुगलले तपाईंलाई अधिक मूल्य दिनेछ । बाहिरी लिंकले प्रतिस्पर्धाको अन्य साइटहरूको तुलनामा वेबसाइटको समग्र मूल्य दर्साउँदछ त्यहि तरीकामा, आन्तरिक लिंकहरूले गुगललाई तपाईंको साइटको बाँकी पृष्ठहरूको सम्बन्धमा पृष्ठ कति महत्त्वपूर्ण छ निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ।
आन्तरिक लिंकहरू यति महत्त्वपूर्ण छन् कि गुगलले अब पृष्ठमा लिंकहरूको कुल संख्यामा सीमाहरू लागू गर्दैन । गुगलको पहिलो एल्गोरिदमले 100 लिंकहरू भन्दा बढि पृष्ठहरूलाई दण्डित गर्‍यो, यो विचार गर्दै कि यो एक स्पाम रणनीति हो। यद्यपि, वर्षौंसम्म यो दण्डलाई हटाइएको छ, त्यसैले जब सम्म प्रयोगकर्तामा मूल्य थपिन्छ तपाईं सबै आवश्यक लिंकहरू समावेश गर्न सक्नुहुनेछ।
आन्तरिक लिंकले केहि बनाउन सक्दछ थोरै मूल्यको पृष्ठहरू रूपान्तरणको लागि (जस्तै होम पेज वा कम्पनीको बारेमा जानकारी) मा पहिलो स्थानहरूमा राख्नु .
यो नयाँ सामग्रीबाट लिंकहरू पृष्ठमा नयाँ मान दिनुहोस् जुन लि link्क हुन्छ र गुगललाई सूचित गर्नका लागि सेवा प्रदान गर्दछ जुन पृष्ठमा नयाँ जानकारी छ। तसर्थ, नयाँ सामग्री मा लिंक सहित यो अधिक छिटो अनुक्रमणिकामा मद्दत गर्न सक्दछ र यसरी तपाईंको सुधार गर्न सक्दछ खोज ईन्जिन स्थिति .
आन्तरिक लिंकको साथ तपाइँको खोज इञ्जिन स्थिति सुधार गर्न3विजयी रणनीतिहरू
1) क्लिक गहिराइ कम गर्नुहोस्
गुगल कथन अनुसार क्लिकको गहिराई (त्यो हो, क्लिक को संख्या जुन घर पृष्ठबाट साइटको एक विशिष्ट पृष्ठमा पुग्न आवश्यक छ) लाई प्रभावित गर्दछ खोज ईन्जिनमा स्थिति । पृष्ठ नजिक पृष्ठ हो, राम्रो यो स्थिति हुनेछ।
वेबमास्टरहरूको लागि यसको मतलब यो हो कि हामीसँग यो धेरै सजिलो छ द्रुत रूपमा विशेष पृष्ठको स्थिति सुधार गर्नुहोस् , विशेष गरी यदि हामी धेरै ठूलो वेबसाइटहरू वा जटिल संरचनाको साथ काम गर्छौं भने। काममा तल झर्न यी सुझावहरूको पालना गर्नुहोस्:
तपाईंको उत्पाद पृष्ठ, ब्लग लेख र मा अधिक मा अधिक सिफारिश वा समान पृष्ठहरू समावेश गर्नुहोस् । यस तरिकाले, उही समान कोटी वा सम्बन्धित कोटीहरूमा अधिक आन्तरिक लिंकहरू हुनेछन्, पृष्ठहरूको सतहमा पुग्न अधिक गहिराइको साथ पृष्ठहरूको कारण।
पहिलो स्तर कोटिहरूको संख्या बढाउनुहोस् , कि छ, शुरू पृष्ठ बाट लिंक कोटिहरु। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि ती कोटीहरूमा उत्पादनहरू केवल केहि क्लिकहरू टाढा छन्।
प्रत्येक वर्ग भित्र पृष्ठ संख्या कम गर्नुहोस् । यदि कोटीहरूमा धेरै उत्पादनहरू छन् भने, यो सामान्य हो कि तिनीहरू सबै एकैचोटि लोड हुँदैनन्, तर ती पृष्ठहरूको सूचीको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ जुन प्रयोगकर्ताले परामर्श लिन सक्दछ। यसको साथ समस्या यो छ कि अन्तिम पृष्ठमा उत्पादनहरू धेरै गहिरो छ। यसलाई हल गर्नका लागि, तपाईं प्रत्येक पृष्ठमा बढि उत्पादनहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ वा बढि कोटीहरू सिर्जना गर्नुहोस् ताकि त्यहाँ प्रत्येकमा कम उत्पादहरू छन्।
यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्दा, सम्भव छ धेरै पृष्ठहरूको क्लिकको गहिराईलाई 50 भन्दा बढि 15 भन्दा कममा कम गर्न। थप रूपमा, यी सुधारहरूले Google मकड़ियोंलाई वेबसाइटमा उत्पादनहरूको पूर्ण सूचीको ट्र्याक गर्न सम्भव बनाउँदछ। थोरै समय। यसले नयाँ उत्पादनहरूलाई अधिक छिटो फेला पार्न मद्दत पुर्‍याउँछ र तिनीहरूको खोजी ईन्जिन स्थिति सुधार गर्दछ।
2) सामग्री केन्द्रहरू सिर्जना गर्नुहोस्
यो रणनीति विशेष गरी प्रयोग गर्ने वेब साइटहरूमा काम गर्दछ सामग्री मार्केटिंग विषयहरूको शृ .्खलामा विशेषज्ञहरूको रूपमा आफैंलाई राख्न। यसले मुख्य मुद्दाहरूको वरपर सम्बन्धित सामग्रीको समूह बनाउँदछ र केन्द्रीय पृष्ठहरू सिर्जना गर्दछ जुन सबै सम्बन्धित लिंकहरू समावेश गर्दछ। यस तरीकाले, सम्भव छ एकै समय सबै विशेष शीर्षकको पृष्ठमा खोजी इञ्जिन स्थिति सुधार गर्न।
यी मुख्य हुन् विशेषताहरु सामग्री केन्द्रको:
तपाईको वेबसाइटको बहुविध पृष्ठहरू समूहीकृत गर्नुहोस् जुन समान विषयसँग डिल हुन्छ वा विशेष कुञ्जी शब्दको वरिपरि घुम्छ । सामान्यतया, यी थिमहरू र कुञ्जी शब्दहरू तपाईंको साइटको केन्द्रीय विषयवस्तुहरूको साथ मेल खानेछन्।
यो केन्द्रीय पृष्ठ वरिपरि संरचित छ । यस पृष्ठले शीर्षक वा मुख्य कुञ्जी शब्द र सामग्री केन्द्रको अन्य पृष्ठहरूमा लिंकहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी समावेश गर्दछ, त्यसैले सबै जानकारी सहि समूहीकृत हुन्छ।
तिनीहरूको बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न बिभिन्न माध्यमिक पृष्ठहरूका बीच आन्तरिक लिंकहरू प्रयोग गर्नुहोस् । जब सम्भव हुन्छ, यी लिंकहरूले एन्कर पाठमा केन्द्रीय विषयवस्तुसँग सम्बन्धित शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ।
यस रणनीतिको विचार भनेको केन्द्रीय पृष्ठले खोज इञ्जिनमा यसको स्थितिको सुधार गर्दछ र यो अधिकार माध्यमिक पृष्ठहरूमा लिंकको बीचमा वितरित हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो, जसले यसबाट फाइदा पनि गर्दछ। थप रूपमा, सामग्री केन्द्रहरूको प्रयोगले सम्पूर्ण डोमेनको स्थिति सुधार र क्लिक अनुपात सुधार गर्न सक्दछ।
3) घटनाहरूसँग सम्बन्धित पृष्ठहरूको स्थिति सुधार गर्नुहोस्
यो रणनीति विशेष रूपमा सुरूवात गर्ने ब्रांडहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो मौसमी अभियानहरू वा विशेष कार्यक्रमहरू राख्नुहोस्, उदाहरणका लागि, क्रिसमस अभियानहरू, बिक्री, ब्ल्याक फ्राइडे वा कांग्रेसको लागि टिकट बिक्री।
घटनासँग सम्बन्धित पृष्ठहरूको प्रबर्धन गर्न र तपाईंको खोजी ईन्जिन स्थिति सुधार गर्न यी लेख्नुहोस् सुझाव :
घटनासँग सम्बन्धित खोजीहरूको लागि एक अनुकूलित ल्यान्डि page पृष्ठ सिर्जना गर्नुहोस् । यस पृष्ठमा घटनासँग सम्बन्धित कुञ्जी शब्दहरूको साथ आफै स्थिति गर्न पर्याप्त पाठ हुनुपर्दछ, तर सँधै प्रासंगिकता कायम राख्दछ। ध्यानमा राख्नुहोस् कि तपाईको लागि एकल ल्यान्डि promote प्रचार गर्नका लागि सजिलो हुनेछ धेरै व्यक्तिगत सामग्री पृष्ठहरू भन्दा धेरै सामग्रीहरूको साथ।
अवतरण पृष्ठमा घटनाको लागि "काउन्टडाउन" राख्नुहोस् । तपाइँको लक्षको चासो जगाउन तपाईलाई मद्दत पुर्‍याउनुको साथ, यो साधारण ट्रिकले सामग्री नियमित रूपमा परिवर्तन गर्दछ र त्यसैले Google का माकुरा पृष्ठ प्राय: क्रोल गर्दछ।
घटनासँग सम्बन्धित पृष्ठहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सामग्री केन्द्र बनाउनुहोस् र तपाईंको अवतरण पृष्ठबाट तिनीहरूलाई लिंक गर्नुहोस् । लि content्क गरिएको सामग्रीले घटना पृष्ठहरू, सम्बन्धित उत्पादन पृष्ठहरू, लेख, कोटीहरू, आदि समावेश गर्न सक्दछ। यसैले, तपाईं अवतरण अधिकार अन्य सम्बन्धित पृष्ठहरूमा पास गर्न पाउनुहुनेछ।
तपाईंको वेबसाईट भित्र अवतरण पृष्ठ प्रमोट गर्न आन्तरिक लि Use्क प्रयोग गर्नुहोस्, अन्य पृष्ठहरूबाट सजीलो पहुँचयोग्य बनाउँदै। उदाहरण को लागी, तपाई यसमा होम पेजबाट लिंक गर्न सक्नुहुनेछ र मेनू भित्र यसलाई प्रमुख स्थानमा राख्न सक्नुहुनेछ।
यस रणनीतिमा, सहि फेला पार्न आवश्यक छ क्षण । पर्याप्त घटनाको साथ तपाईंको घटना पृष्ठमा काम गर्न सुरू गर्नुहोस् र घटना समाप्त भए पछि पृष्ठ र लिंक दुवै हटाउन नबिर्सनुहोस्।
यो रणनीतिहरु जोड्ने आन्तरिकले खास विषयको वरपर साइटको अधिकार बढाउन सक्छ, क्लिकको अनुपात बढाउन र व्यक्तिगत पृष्ठहरूको खोज इञ्जिन स्थिति सुधार गर्न सक्दछ।
यदि तपाइँ आन्तरिक लि links्कहरू रणनीतिक तरिकाले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको साइटको वेब पृष्ठहरूको स्थिति र जैविक भ्रमणको संख्यामा देखिने परिणामहरू पाउनुहुनेछ।
तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाइँको खोज इञ्जिन स्थिति मा सुधार एक सरल तरीका, क्लिकको गहिराई कम गर्न सामग्री केन्द्रहरू सिर्जना गर्न र विशेष पृष्ठहरूको समूह प्रमोट गर्न तपाईंको वेबसाइटको समीक्षा दिनुहोस्। तपाईं कसरी परिणामहरू सार्थक हुनेछ देख्नुहुनेछ।
डिजिटल पुस्ताहरू: कसरी तपाईंको अनलाइन विज्ञापनको साथ शताब्दी आकर्षित गर्ने →